Kenya yakagadzirira senzvimbo nyowani yeUNWTO General Assembly 2021
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Hurumende Nhau » Kenya yakagadzirira senzvimbo nyowani yeUNWTO General Assembly 2021
African Tourism Bhodhi • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • Kenya Kupwanya Nhau • nhau • vanhu • Spain Kuputsa Nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau
Kenya iri kumisikidza maitiro matsva uye hutungamiriri mukushanya kwepasi rose kupora kubva kuCOVID.
The Hon. Najib Balala haana kutambisa kana miniti paakakoka World of Tourism kuti iite iri kuuya UNWTO General Assembly muKenya.
Zvave kuna Secretary General weUNWTO Zurab Pololikashvili kuti ataure hongu pasina kunonoka.
UNWTO yakamirira kusvika Mugovera kuzivisa nhengo. General Assembly iri kuuya yakatamiswa kubva kuMorocco kuenda kuSpain.
NeSvondo The Hon. Najib Balala, Secretary of Tourism weKenya akakoka World Tourism Organisation (UNWTO) nenhengo dzayo kuti vaite General Assembly yavo iri kuuya muKenya.
Moroko ndiyo yaive nzvimbo yemagineti uye yakangomiswa svondo rapfuura nekuda kwekunetseka kweCOVID.
Kenya yagara iri mutungamiri wekushanya muAfrica, uye nekupfuura kana zvasvika pakumisikidza toni uye mafambiro ekondinendi nekumhiri.
Musi weMugovera Hon. Najib Balala, Secretary of Tourism weNyika ino yeEast Africa akaziviswa neUNWTO nezve UNWTO General Assembly yakamirirwa kwenguva refu yakamiswa muMorocco nekuda kwekunetseka kweCCIDIDs uye yakatamira kuSpain, dzimbahwe resangano.
Pakabuda iyo UNWTO Sekretariat nekushamisika kwesvondo rino, WhatsApp yakava chikuva chakabatikana chekuti makurukota ekushanya nevatungamiriri vekushanya vataurirane.
Nzvimbo yekutandarira yevatsigiri yakaiswa pamwechete panhunzi. Hazvina kutora kugutsikana kuna Najib Balala, munyori anoshanda kwenguva refu wekushanya kuKenya kuti atore dambudziko iri.
Apo Morocco yakasarudzwa senzvimbo yemusangano mukuru weUNWTO muSt. Petersburg, Russia yakakwikwidzana neKenya nePhilippines.
Gamba reWorld Tourism Organisation Najib Balala akagadzirira kugamuchira vamiriri ve24th World Tourism Organisation General Assembly kuenda kuKenya kubva muna Mbudzi 30 kusvika Zvita 3, 2021.
NeSvondo pakati pehusiku, Gurukota rakarara eTurboNews: "Ini chete akanyora tsamba yaitikoka UNWTO rokubata rechi24 General Assembly pano muna Magical Kenya."
Miniti iyo iyi yakaita kutenderera, kufamba uku kwakafarirwa pasi rese.
VaCuthbert Ncube, sachigaro weAfrican Tourism Board vakataura pamusoro pechiitiko ichi, kechipiri pavakasvika muJohannesburg nendege yeEthiopian Airlines mushure merwendo rwavo rwekuEthiopia.
“African Tourism Board inotsigira zvizere kufamba uku kuzere nemoyo.
The Hon. Najib Balala ishamwari yakanaka yeATB uye mutungamiriri asingapokane wekushanya muAfrica nekumwe. Ini ndinoda kukorokotedza Va Balala nekuona kwavo uye kukurudzira iwo Hon. Munyori weUNWTO Zurab Pololikashvili kutsigira chikumbiro ichi chine rupo, saka Kenya, nyika dzese dze Africa, pamwe nepasi rose vanogona kushanda pamwechete kuita musangano wechi24 weUNWTO General Assembly magungano akanakisa akamboitika. Zvechokwadi ine kukosha kukuru kune ramangwana rekushanya. Tese tinoda hutungamiriri uye tinobvumirana kuti tingabuda sei mudambudziko iri todzosera chikamu ichi. ”
The World Tourism Network inomiririra masangano ezvekushanyirwa munyika dzinopfuura zana nemakumi masere anotsigira zvakasimba kuitirwa kweKenya musangano mukuru weUnited Nations World Tourism Organisation.
Dr. Peter Tarlow, semutungamiri weWorld Tourism Network, akaona kukosha kwekukanganisa kushanya uye pan-globalism uye akataura kuti kuitirwa kweKenya musangano mukuru wakadai kunoratidza chikamu chitsva uye chinobudirira chekushanya kwepasirese.
Sesangano repasi rese, zvakakosha kuti magungano ezvekushanya aitirwe pasirese uye kuitisa kwakadai kucharatidza Africa, kunyanya East Africa, uye nekupa kukurudzira kwekuvandudza hupfumi kuburikidza nekushanya muAfrica yose.
World Tourism Network inotsigira zvakasimba pfungwa yekuti nyika dzepasi rose dzinofanirwa kuwana mikana yakaenzana yekuitisa misangano mikuru. Iyi nzira yepasirese inoshandura pfungwa dzeUnited Nations mukuita chokwadi.
Morocco payakaita danho muna Gumiguru 15 yekukanzura chiitiko, UNWTO yakazivisa nhengo nemazvo mukati memazuva matatu muna Gumiguru 3 nezve General Assembly yaizoitirwa muMadrid, mahofisi makuru eUNWTO.
Nekupa kweKenya kwerupo, zvaizokudza kuedza kwakaitwa neMorocco muchiitiko ichi uye kubvumidza kuti General Assembly igare muAfrica sezvaitarisirwa.
Zvinofanira kucherechedzwa, kuti Executive Council yakaisa toni yeGA musangano wekupedzisira waiva muMadrid. Nzvimbo yezviitiko zviviri izvi yakanga isati yambove muguta rimwe chete.
Veruzhinji vave kuona hutungamiriri hweUNWTO huchitendera chikumbiro cheKenya pasina kunonoka.